आज मारिया Tskiriya सायद सबैभन्दा लोकप्रिय रूसी फिटनेस मोडेल छ। त्यो खेलहरु र माल को बजार धेरै ब्रान्डहरु पनि छ। यस लेखमा, यो छोटो जीवनी मा वर्णन गरिनेछ।
Mariya Tskiriya सेन्ट पीटर्सबर्ग मा 1992 मा जन्म भएको थियो। केटी को पिता साना व्यापार थियो र मेरो आमा संगीत शिक्षकको रूपमा काम गरे।
यो मरियम Tskiriya सधैं यस्तो विशाल लोकप्रियता थियो कि उल्लेख गर्नुपर्छ। सम्म 2011, यो सिर्फ राम्रो र धेरै साधारण केटी थियो। त्यसपछि त्यो विवाहित भयो र एक छोरी, हव्वालाई जन्म दिनुभयो। सर्गेई नाम मरियमको पति फिटनेस प्रशिक्षक काम गरे। यो प्रसब समयमा पाएको वजन, र शरीर पुल पत्नी मदत गर्ने उहाँले थियो। तर यो अझै पनि छाडेनन्। Sergey प्रतिस्पर्धी गतिविधि आफैलाई प्रयास मरियम प्रस्ताव राखे। अन्त मा, त्यो श्रेणी मा शहर च्याम्पियनशिप मा प्रथम स्थान जित्यो "फिटनेस बिकनी।" थप प्रगति गर्न, त्यो एक चिरपरिचित प्रशिक्षक Aleksandru Vishnevskomu को सल्लाह खोजे। उनको निकै आकार सुधार र केही महत्त्वपूर्ण टूर्नामेंट जीत मदत गरे।
सुरुमा, मारिया गल्ती धेरै गरे। तर कोच सिफारिसहरू र आफ्नो शरीर sensations विश्लेषण तिनीहरूलाई सच्याउन समय मदत गरे। Tskiriya को पम्प्ड मांसपेशीमा मा पूर्ण ध्यान र बाँकी आराम गर्न सल्लाह दिएको छ। कुनै अलमल्याउने (फोन, संगीत, कुराकानी, आदि) हुनुपर्छ। यसलाई आफ्नो शरीर को संकेत अनुगमन गर्दा अभ्यास विभिन्न कोण र भेरिएसनहरूमा प्रयास गर्न आवश्यक छ। शरीर को आदर्श स्थिति पत्ता लगाउन मात्र तरिका, 100% द्वारा प्रशिक्षार्थी मांसपेशी सक्षम गर्नुहोस्।
को प्रतियोगिताहरु साथै मारिया Tskiriya प्रचार गतिविधिमा संलग्न। केटी खेलहरु निर्माताहरु र उत्पादनहरु संग धेरै अनुबंध छ। सबैभन्दा सफल भव्य प्रकारका मरियम प्रवर्द्धन गर्न अनुमति तंग चड्डी र लेग्गीन्स। Bikinistka पनि प्रशिक्षक, फिटनेस मोडेल, फोटोग्राफर र कहिलेकाहीं रिङ केटी (को M1 महासंघ झगडे मा राउन्ड नम्बर वेयर प्लेट) को रूपमा काम गर्छ। भविष्यमा त्यो एक प्रतिस्पर्धी क्यारियर पूरा र मोडेलिंग व्यापार गर्न आफूलाई सम्पूर्ण समर्पित योजना।
पहिले मारिया Tskiriya माथि प्रस्तुत गरिएको छ जो जीवनी, मात्र प्रदर्शन प्रोत्साहन गर्छौं। सिद्ध आकारमा मञ्चमा उपस्थिति - यो सर्वोत्तम प्रेरणा छ। तर समय संग, सबै कुरा परिवर्तन भयो। एक खेलाडी पछि coveted शीर्षक जित्यो छ। अब त्यो अझै यसलाई वरिपरि पतिको सर्गेई समर्थन उत्प्रेरित गर्छ र।
जिम मा उचित कसरत
कसरी बालिका को हातमा वजन गर्न: व्यायाम
को विभाजन stretching - एक सुन्दर gait बनाउँछ
जिम ऊफा: सस्तो र सहज
हामी आफ्नो हातले मरम्मत ब्याट्री पेचकस बनाउन
तपाईं रात मार्फत सुत्न सक्नुहुन्छ? एक सूथिंग चिया असामान्य नुस्खा तयार गर्न प्रयास
फ्लोरिडा, ओर्लान्डो शहर स्थलहरू, फोटो, यात्री लागि सुझावहरू
धेरै रोगबाट लागि उपाय रूपमा अदुवाको जाँड
हवाइ विधि Hooponopono: उपकरण र समीक्षा
राज्य खेत "रूस" (एडलर): सोची को दक्षिणी क्षेत्रमा छुट्टी विशेषताहरु
के लक्षण microadenomas pituitary साथ दिनु? कारण र रोग को उपचार
क्यालिफोर्निया मा गरेको भनेर हुनुपर्छ गर्दा, 20 कुराहरू
Bonhomie - यो के हो? अर्थ र उदाहरण